90 ° umsindo efanelana
Flat kufaneleka plate
U balolonge kufaneleke
imilo Z efanelana
UHaiyan Hama Hardware Co., Ltd. (HMSTRUT) yasekwa ngowe-2002, nto leyo ibekwe uHaiyan kwisiphaluka ---- kumbindi iteksti River Delta. Thina ahlanganise indawo 27000 square metres, ngoku kufuneka abasebenzi abangaphezu kwama-200, kuquka 16 iinjineli, abaphathi 46. Kwakhona saseka i Intshona Melika Centre Service eKhanada.
HMSTRUT i mveliso echubekileyo kumazwe angaphandle ukuba uyakhathala na uphando, uphuhliso kunye nokuveliswa kwenkqubo yokufaka. Iimveliso eziphambili zezi: channel nut, itshaneli, ijelo kufanelekile, umbhobho okubamba, lokuvala njalo njalo.
HMSTRUT ilandela inkqubo ubukhulu lwabaxhasi, intsimi entsha umgangatho-yokuqala kunye nokhuseleko ngendlela njongo top-grade, ekuphuhliseni iimveliso ezintsha kunye nokwandisa. izibonelelo zethu kakuhle ngokwaneleyo kunye nolawulo Obusemagqabini ubunjani kuwo onke amanqanaba imveliso yenza sikwazi ukuqinisekisa totao ngokwaneliseka. Ngapha koko, siye safumana ISO9001, ISO14001, ISO18001, CE kunye ul.
HMSTRUT ithatha "UKHUSELEKO, ukuthembeka, ukusebenza, UKUZAHLULELA, EZINTSHA, WIN-WIN" njengoko amaxabiso yenkampani. Ngoku iimveliso zethu kuthakazelelwa kakhulu iintlobo ezahlukeneyo kulo ihlabathi, ezifana eYurophu, eMelika kunye Japan.
Uzimisele ukuba abe yinkokeli koshishino kwiinkqubo ufakelo.
No.388 North Zhenzhong Road, Shendang Town, UHaiyan City, Zhejiang kwiphondo, China 314311
© Copyright - 2010-2022: All Rights Reserved. Tips - Products Hot - eKhaya - AMP Mobile
emboxo Lokulinganisa , Strut Channel Nut Without Spring, Jikelele Lokulinganisa , Channel Lokulinganisa , Channel T Plate Lokulinganisa, Channel Nut,